Endrik'io pejy io tamin'ny 2 Mey 2016 à 18:03
6 octets ajoutés , il y a 3 ans
Raha eo amin'ny sehatra [[toekarena]] ny '''Asa''' dia karazana [[andraikitra]] sy [[adidy]] sahanin'ny [[olona]] tsirairay, ka miteraka na mahazo vokatra tsara. Ny asa dia loharano hahazahoana sy hampidiram-bola amin'ny fiainan'ny [[olombelona]] eto ambon'ny tany. [[Mpiasa]] (anasa) no fiantsoina ireo olona manana azy ary [[tsy anasa]] ireo olona izay tsy misy azy, raha amin'ny [[firenena]] iray dia tena zava-dehibe ny fananana ny asa ary miteraka fahatrana kosa ny olona tsy anasa, misy [[lalàna]] sy ny [[politika]] apetraka [[fanjakana]] momban'ny asa mba hafahana mandamina sy mandrindra azy. Ny [[orinasa]] no mampiasa ny olona izay te-hiasa ka manana traikefa mifanaraka amin'izay ilainy, misy koa ny miasa tena na mivarotra, amin'ny ankapobeny ny olona rehetra dia natao hiasa mba hivelomany.
Ny asa dia loharano hahazahoana sy hampidiram-bola amin'ny fiainan'ny [[olombelona]] eto ambon'ny tany.
[[Mpiasa]] (anasa) no fiantsoina ireo olona manana azy ary [[tsy anasa]] ireo olona izay tsy misy azy, raha amin'ny [[firenena]] iray dia tena zava-dehibe ny fananana ny asa ary miteraka fahatrana kosa ny olona tsy anasa, misy [[lalàna]] sy ny [[politika]] apetraka [[fanjakana]] momban'ny asa mba hafahana mandamina sy mandrindra azy.
Ny [[orinasa]] no mampiasa ny olona izay te-hiasa ka manana traikefa mifanaraka amin'izay ilainy, misy koa ny miasa tena na mivarotra, amin'ny ankapobeny ny olona rehetra dia natao hiasa mba hivelomany.
== Famaritana ==
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/779538"